Salvador Adame No Mpanao Gazety Fahafito Novonoina Tao Meksika Ny Taona 2017 · Global Voices teny Malagasy
Salvador Adame No Mpanao Gazety Fahafito Novonoina Tao Meksika Ny Taona 2017
Nandika (en) i Laura Vidal
Voadika ny 15 Septambra 2017 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Français, Swahili, čeština , Italiano, عربي, Türkçe, 日本語, Español
Salvador Adame. Sary nalefa niparitaka tamin'ny Twitter.
Hita tao andrefan'ny fanjakana Meksikana tao Michoacan, ny vatana may, an'i Salvador Adame, mpanao gazety sy mpamorona ny fantsom-baovao 6TV ao an-oerana, hoy ireo manapahefana tamin'ny 26 jona:
Taorian'ny nandraisana sy nampitahàna ireo santionany tamin'ireo dian-tanana takian'ny lalàna amin'itony dingana ataon'ireo manampahaizana avy amin'ny Genetics Direction itony, ny ADN dia ahafantsika mamintina fa an'i Salvador Adame Pardo ireo sisa tavela ireo, araka ny fiantsoana azy fony izy mbola velona.
Iray volana talohan'izao, vondrona iray mitam-piadiana no naka an-keriny an'i Adame, araka ireo tatitra voalaza tao anaty gazetim-pirenena La Jornada.
Faritra be mpahalala amin'ny anarana hoe Tierra Caliente (Tany Mahamay) no nahitàna ny vatany, sady iray amin'ireo tena mahery setra indrindra tao Michoacán, fanjakana iray izay, nandritra ireo taona vitsivitsy lasa izay, no hita ho tsy mitsaha-mitombo ny heloka bevava sy ny fiampangana mikasika ny fifandonana ifanaovan'ny governemanta ao an-toerna sy ny heloka bevava nomanina.
Ny gazety tsy miankina iray Animal Politico no nitatitra fa niverimberina ary imbetsaka nahazo fandrahonana ho faty i Adame talohan'ny nahafatesany, nampitandrina azy hampitsahatra ny asany amin'ny maha-mpanao gazety azy. Ny vadiny Frida Urtiz nilaza fa nahatsiaro faneriterena goavana izy noho ny asa nataony niaraka tamin'i Adame.
Izaho sy ny vadiko no tompon'ireo vaovao ao amin'ny fantsona. Nahazo fifanarahanasa mikasika dokambarotra tamin'ny fiadidiana any tanànan'i Múgica izahay mba hanao ny asa izay tsy maintsy ataon'ny fitantanana rehetra: manome vaovao an'ireo olom-pirenena. Nialànay izany noho ny tsindry azonay.
Lahatsoratra iray navoakan'ny 6TV ihany no nanoritsoritra an'i Adame toy izao:
Ilay mpanao gazety, izay niharan'ny fanenjehan'ny mpitandro ny filaminana herintaona lasa teo, dia nihazona fitarihana mavitrika, mitsikera, matsilo saina ary matanjaka sy be herimpo manohitra ny rivotra maloton'ny heloka bevava izay nahazo laka teo amin'ny faritra, fantatra amin'ny hoe Cuatro Caminos, fon'ny fanjakana sady foiben'ny ady tsy misy fiafaran'ireo andian-jiolahy.
i Adame no fanimpitony amin'ireo mpanao gazety novonona tao Meksika ny taona 2017, araka ny fanamarihan'i Cencos mpiaro ny zon'olombelona. Nibitsika GIF iray izy ireo mba hanazavàny ny fahitany an'i Adame, mitaky ny rariny ary mamintina amin'ny fanambaràna hoe :”Tsy maty ny Fahamarinana raha vao mpanao gazety iray no vonoina”:
#SalvadorAdame es el séptimo periodista asesinado en lo que va del año. Exigimos esclarecimiento y un alto a las agresiones. #NoAlSilencio pic.twitter.com/LCaRiJmrkx
#SalvadorAdame no mpanao gazety fahafito maty novonoina hatramin'ny fiandohan'ny taona. Mangataka fanazavàna sy fampitsaharana ny herisetra rehetra izahay. #TsyMilaFahanginana.
Lasa lavitra mihoatra ireo mpanao gazety niharany ny vokatr'ireny fanafihana manohitra mpanao gazety ireny. Frida Urtiz ohatra, niaritra olana ara-pahasalamana goavana taorian'ny fakana an-kery ny vadiny.
Vao tsy ela akory, ny solotena ambony avy amin'ny Sekreteran'ny Atitany, Roberto Campa, no toa nanamaivana ny zavamisy raha nanambara fa, raha oharina tamin'ireo fitantanana tany aloha, tsy mbola io no vanim-potoana henjana indrindra nisian‘ny herisetra natao tamin'ireo mpanao gazety tao Meksika.
Marina fa, na izany aza, tsy zava-baovao io herisetra atao an'ireo izay manao ny asa fanaovana gazety ao Meksika io. Tamin'ny 2015, nanoratra i Isabel Uribe mpanao gazety hoe:
Ao anatin'ny asa fanaovana gazety ao Meksika, mamofompofona fahafatesana ny ranomainty. Ny famonoana an'ireo sivy mpanao gazety tamin'ny fiantombohan'ny taona 2015, dia manamafy ny maha anisan'ny toerana lozabe indrindra eto amin'ny planeta an'i Meksika raha momba ny fanaovana io asa fanaovana gazety io, boaty Pandora iray manafina ireo habibiana mahatsiravina indrindra: herisetra, fampitahorana, fampijaliana, fanjavonana an-terisetra, sivana ataon-tena ary ny fahafatesana.
Taorian'ireo vaovao fanambaràna ny fahafatesan'i Adame, nanao izao tsikera manaraka izao i Luis De Tlacuilo, mpampiasa Twitter:
Mampalahelo ny mahatsapa fa mety ho vonoina eo ampanatanterahana ny asany ny olona iray#SalvadorAdame
Nomelohin'i Jenaro Villamil, mpanao gazety, ny governemanta ao an-toerana:
Mpanao gazety iray hafa namoy ny ainy. #SalvadorAdame. Taorian'ny herinandro vitsivitsy tsy nanjavonany [an-kery] teo ambany fitondrana kamo velon'i Michoacan
Nanery ireo andrim-pitondrana hafa ao amin'ny governemanta mba hihetsika ny birao misahana ny fiarovana zon'olombelona ao Meksika :
CNDH llama a las autoridades de los 3 niveles de Gobierno a investigar y esclarecer el homicidio de #SalvadorAdame.👉 https://t.co/ViPUg2gDbF pic.twitter.com/8LxMmqy28q
Antsoin'ny CDNH ireo manampahefana ao amin'ireo ambaratonga telo ao amin'ny governemanta mba hanadihady sy hamaha ny olana mikasika ny famonoana an'i #SalvadorAdame.
Manjohy ny lisitr'ireo mpanao gazety izay novonoina ny taona 2017 i Salvador Adame, lisitra iray ahitàna an'i Miroslava Breach sy Javier Valdez.